देउसीभैलो पैसा असुल्ने माध्यम - NepalKhoj
देउसीभैलो पैसा असुल्ने माध्यम
नेपालखोज २०७६ कार्तिक १० गते ९:४५
१० कार्तिक, बेनी । तिहारको आकर्षणमध्येको एक मानिएको देउसीभैलो आजकल आशिष दिने, मनोरञ्जन लिने र साथीभाइसँग रमाउने माध्यम नभई पैसा असुल्ने माध्यम बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
केही सामाजिक सङ्घसंस्था र व्यक्तिले मेमोरीमा रेकर्ड गरिएका गीतको सहयोग लिइ बेतालको नृत्य (डान्स) देखाउँदै देउसीभैलोलाई पैसा असुल्ने माध्यम बनाइरहेका स्थानीय व्यापारीले बताएका छन् । हुन पनि आजकल गाइने देउसीभैलो र देखाइने नृत्यमा कुनै पनि मौलिकता देखिँदैन ।
अधिकांश भैली समूहले हिन्दी र नेपाली चलचित्रका गीत एवं एल्बममा राखिएका देउसीभैलो गीतमा नाच्ने गरेका छन् । न उनीहरुले मादल बोकेका हुन्छन् न मुरली र खैजडी नै । ठूलाठूला साउन्डबक्समा गीत घन्काउँदै हल्ला गर्दै देउसीभैलो समूहहरु हिँडेका देखिएका छन् ।
यस्तै हो भने केही वर्षपछि लोकबाजा र भैलीको मोलिकता हराउने निश्चित छ । त्यस्तै बेनीका ज्येष्ठ नागरिक डम्मरबहादुर कार्कीले देउसीभैलो खेल्दा सबैले लोकगीत आफैँले गाउने, मुरली, मादल, खैजडी, झ्याली, टयाम्कोलगायतका मौलिक बाजा बजाउने गरेको बताए। उनले भने, “अब ती सबै कुरा एकादेशका कथामा परिणत भए, तिहारको मौलिकता हराउँदै गयो, आयातीत संस्कृतिले फस्टाउने मौका पायो ।”
कञ्चनपुरमा हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण
सुनसरीको बर्जु घटना छानविन गर्न प्रशासनद्वारा छानविन समिति गठन
माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य
सुनुवाइमार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने तयारी
सावधान ! कतै मास्क नलगाइ हिँड्नु त भएको छैन ?
कोरोना परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारीमा ८००, निजीमा १५ सय तिर्नुपर्ने
एकैदिन थपिए ११ हजार ३५२ कोरोना संक्रमित, संक्रिय संक्रमितकाे संख्या ४७ हजार नाघ्याे
नयाँ एडिसनमा टाटाको दमदार एसयूभी
फ्रान्समा एकै दिन ४ लाख ६४ हजारमा कोरोना संक्रमण
मेची भन्सारको राजस्व असुली बढ्याे
‘महिनावारीको विभेद सबै जात, धर्म, भाषा, संस्कृति र भूगोलमा छ’
प्रधानमन्त्री कप टी-ट्वान्टी प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीलाई
अमेरिका किन पुगिन् हिमानी ?
‘ओमिक्रोनले ज्यान लिन्छ लापरबाही नगरौं’
इम्युनिटी बलियो बनाउने खानेकुरा ! (रिपोर्ट)
उपत्यकामा आजदेखि निषेधको नयाँ आदेश लागु
बालबालिका र मास्कको प्रयोग कसरी गर्ने ?
मन नै मनुष्यको एकमात्र शत्रु
कोभिडका कारण स्कुल बन्द गर्नु कति उचित ? (रिपोर्ट)
कृष्णलाई कसरी पुकार्ने ?
जाडोभरि खानुस् तिलको लड्डु